တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကာတာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
နေပြည်တော်၊ မေ ၂၈
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည် ထွက်ခွာ တော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကာတာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hassan Bin Mohamed Rafei AL-Emadi အား ယနေနေ့လယ်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကာတာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး နှင့် အတူ တာဝန်ရှိသူတို့ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာ-ကာတာ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍများတွင် ကာတာနိုင်ငံက ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့် ကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ကာတာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးတို့သည် အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ကာတာနိုငျငံသံ အမတျ ကွီးအား လကျခံတှဆေုံ့
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ တာဝနျပွီးဆုံး၍ ပွနျလညျ ထှကျခှာ တော့မညျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ကာတာနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Hassan Bin Mohamed Rafei AL-Emadi အား ယနနေလေ့ယျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တာဝနျရှိသူတို့တကျရောကျကွပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ကာတာနိုငျငံသံအမတျကွီး နှငျ့ အတူ တာဝနျရှိသူတို့ တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ မွနျမာ-ကာတာ နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးပိုမိုတိုးတကျ ကောငျးမှနျအောငျ ဆောငျရှကျရေး ဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံ၏ ငွိမျးခမျြးရေး၊ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးကဏ်ဍမြားတှငျ ကာတာနိုငျငံက ကူညီ ဆောငျရှကျပေးနိုငျမညျ့ ကိစ်စရပျမြားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ ဆှေးနှေးကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ကာတာနိုငျငံ သံအမတျကွီးတို့သညျ အမှတျတရ လကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျပေးအပျခဲ့ကွသညျ။